बिजुली चम्किरहेको अवस्थामा, मोबाइल चार्जमै राखेर इयरफोन लगाउँदा करेन्ट लागेर यु’वतीको मृ’त्यु ! – AB Sansar
October 9, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on बिजुली चम्किरहेको अवस्थामा, मोबाइल चार्जमै राखेर इयरफोन लगाउँदा करेन्ट लागेर यु’वतीको मृ’त्यु !
एजेन्सी । ब्राजिलकी एक १७ वर्षीया विद्यार्थीको मोबाइल चार्ज गर्दैगर्दा कानमा इयरफोन लगाउँदा क’रेन्ट लागेर मृ’त्यु भएको बताइएको छ । लुइजा पीहेइरो नाम गरेकी युवतीलाई भुइँमा अचेत अवस्थामा लडिरहेको भेट्टाएपछि परिवारले उनलाई तुरुन्तै अस्पताल पुर्याएको डेलीमेलले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
ब्राजिलको राइको फ्रीओमा बस्ने लुइजालाई आइतबार अस्पताल पुर्याइएपनि चिकित्सकहरुले उनको ज्या|न बचाउन नसकेको बताइएको छ ।उनकी हजुरआमाले चिकित्सकलाई बताएअनुसार उनी लड्दा उनको कानमा इयरफोन टाँसिएको थियो भने चार्ज भइरहेको उनको फोन पूर्ण रुपमा नष्ट भएको बताइएको छ ।
आफन्तहरुले उनको क’रेन्ट लागेरै मृ’त्यु भएको दाबी गरिरहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले बताएका हुन् । उनले चार्ज गर्दै फोन चलाउँदा फोनको केही भाग पग्लिएपछि इयरफोनमार्फत उनलाई क’रेन्ट लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।